इन्फ्रास्ट्रक्चरको आइपिओ शुक्रबार बाँडफाँड हुने, ७५ हजार आवेदन रद्द, कति पर्ला तपाईंलाई ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more इन्फ्रास्ट्रक्चरको आइपिओ शुक्रबार बाँडफाँड हुने, ७५ हजार आवेदन रद्द, कति पर्ला तपाईंलाई ?
माघ १४ गते, २०७७ - १७:२८
काठमाडौं । इन्फ्रास्ट्रक्टर बैंकको आइपिओ आगामी शुक्रबार बाँडफाँड गर्ने तयारी गरिएको छ। बिक्री प्रवन्धक एनआइबिएलएस क्यापिटलका अनुसार शुक्रबार बाँडफाँड गर्नेगरी नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग स्वीकृति मागिएको छ।
कम्पनीको आइपीओमा आवेदन दिएका ७५ हजार बढी आवेदन रद्द भएको क्यापिटलले जनाएको छ । कम्पनीको आइपीओमा परेको कुल १५ लाख ५० हजार ९० जनाले आवेदनमध्ये १४ लाख ७५ हजार ८० आवेदन मात्रै प्रक्रिया पूरा भएका छन् ।
बैंकको आइपिओमा कुल १५ लाख ५० हजारले १८ करोड ३४ लाख कित्ता सेयर माग्दै आवेदन दिएका थिए।
कम्पनीको आइपीओमा ५० कित्तासम्मका लागि आवेदन दिने सबैले मागेजति सेयर पाउनेछन् भने सोभन्दा बढी कित्ता माग गर्नेले गोलाप्रथाबाट अधिकतम ६० कित्ता सेयर पाउने भएका छन् ।
धितोपत्र बाँडफाँड निर्देशिकाअनुसार पुगेसम्म सबैलाई १० कित्ता र सोभन्दा बढी सेयर बाँडफाँड गर्न पुग्ने अवस्थामा १० ले गुणा जाने अंकमा बाँडफाँड गर्नुपर्छ।
माघ १४ गते, २०७७ - १७:२८ मा प्रकाशित